I-Clarens powder: ukubuyekezwa kwezinhlobo nezibuyekezo
Ngamunye umkhiqizo omuhle womkhiqizo u-Clarins udalwa ngomgomo owodwa - ukugcizelela ubuhle besifazane. I-Powder "i-Clarens" yaziwa ngokuthungwa kwawo okukhanya, ukwakheka kwezithako zemvelo, ukupakisha kwe-laconic, kalula ukusetshenziswa, futhi okubaluleke kakhulu, ukuhlonipha abesifazane emhlabeni jikelele.
Amagama ambalwa mayelana nomkhiqizo
Le ndaba yaqala kude no-1954, lapho umengameli wamanje we-Clarins ekhathazeka, uJacques Curten-Clarens, wavula i-Beauty Institute eParis futhi wakhiqiza i-batch of oil esekelwe ku-100% yemifino yemvelo yemvelo.
Ngo-1980, lo mshini waba umholi eFrance ekukhiqizeni izimpahla zokunethezeka. Futhi eminyakeni engu-20 kamuva yiyona engcono kakhulu eYurophu.
Manje, "uClarence" - ihlakazekile emhlabeni jikelele, ngaphezulu kuka-3000 salons beauty and 31 Beauty Institute.
Ifilosofi namaxabiso omkhiqizo
Igama elithi "Clarence" livele ngenxa yothando oluqotho nokuhlonipha okungenakuqhathaniswa kukaJacques Courtene kuya ocansini omuhle. Enhliziyweni yokuphumelela akukhona kuphela ukuqeqeshwa kwabasebenzi, kodwa futhi nesifiso sabo sokusungula abesifazane ngendlela engcono kakhulu emhlabeni jikelele wezinsiza. Futhi ubuhle budalwe amandla ezitshalo.
Ngokomsunguli, abameleli be-flora bayakwazi ukusula izimpawu zesikhathi esedlule ebusweni futhi bavikele emthelela omubi wemvelo. Izimangaliso kungenzeka! Kodwa ngenxa yalokhu udinga ukuphikelela, unolwazi oluthile futhi ulwela ukuthola. Lezi yizici ze-laboratory. Futhi ukuze akhiphe amandla obuhle kusukela enhliziyweni yezitshalo, isayensi iyadingeka.
Izindinganiso zenkampani zisekelwe ekuhlanzeni nasekuhloliseni kwemvelo kokukhiqiza. Ukukhetha izithako zokukhiqiza i-compact powder, u-Clarens ukhetha izinto ezivuthiwe zezitshalo ezivela ezweni (eFrance) noma ezithengwa ngokuhweba okulungile.
Isiqubulo senkampani inhlonipho yemvelo!
I-powder ngayinye "uClarens" idalwe ngomgomo owodwa: ukufezekisa ukugqoka okungabonakali futhi unike ubuso ngethoni. Kodwa izindlela zokubheja zomkhiqizo ziyaziwa ngokuhlala kwazo okungapheli.
Ububanzi be "Clarens" powders kuhlanganisa imikhiqizo ehlukahlukene eyenzelwe uhlobo ngalunye lesikhumba futhi ehlukile ekutheni. Masikhulume ngabo ngokuningiliziwe.
Ububanzi be-compact powders buqukethe izinhlobo ezintathu:
Faka i-Compact Haute Tenue.
Ukuthungatheka kuboniswa izinhlobo ezimbili:
Umbusi ngamunye unomgomo wawo wokusebenzisa:
I-powder fryable isetshenziswa ebusweni ngebhayisikili efika kulesi kit;
I-Compact - isiponji esikhethekile.
Ngokuya komphumela oyifunayo nokuthandwa ngabanye, uma kusekelwe impendulo, i-powder "i-Clarens" ingasetshenziswa nge-brush ejikelezayo noma ephansi. Ukusebenzisa umkhiqizo njengethuluzi le-tonal kuyadingeka:
Hlanza futhi uphuthukise ubuso.
Hlanganisa ibhulashi emanzini ashisayo noma abilisiwe, gxuma noma yikuphi uketshezi oluningi.
Gcwalisa isesekeli nge powder, sebenzisa ebusweni bese usakaza umkhiqizo ukuze ungashiyi noma yiziphi izinhlayiya.
Le myalelo ayisebenzi ku-powder Bronzing Duo. Isetshenziselwa kuphela isicelo esomile ukuthola okungaqondakali nakancane.
I-matirujushchaja powder emangalisayo "Klarans", idalwe ebuchwepheni obusha ngokuphelele. Ukwakhiwa kwezithako zemvelo kuphela kanye nezitshalo zokutshala. Izingxenye zisusa amafutha amaningi, zivimbela ukubonakala kwazo futhi zinakekele isikhumba.
Ukuthungwa kwe-ultra-soft and soft of the Clarens amaminerali powder ukugaya okuhle komkhiqizo. Ukuthola lokhu kunenzuzo, umkhiqizo awunaki ama-pores, awubangeli ukusabela okweqile nokucasula. I-Powder ilungele abanikazi bazo zonke izinhlobo zesikhumba, ngaphandle komile.
Ukuze uvimbe imisebe ye-UV enokwethenjelwa, i-SPF 15 ye-factor factor sunscreen inesibopho. Noma kunjalo, akuyona kakhulu. Ngakho-ke, ithuluzi linconywa ukuthi lisetshenziswe ekwindla nasentwasahlobo, ngoba ngalesi sikhathi ilanga alishintshi kakhulu, lesi siqinisekiso sokuvikeleka sinokwethenjelwa ngisho nangesikhumba esilula kakhulu.
Iphalethi yombala imelelwa ama-shades amathathu:
02 - ephakathi.
Lokhu kuhlukahluka kusiza intombazane ngayinye ukukhetha umkhiqizo oyifunayo emthunzini olungile. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe batusa ukuthenga izinhlobo ezimbili ngesikhathi esisodwa: ukuhluka okukhanya ebusika, okumnyama ehlobo elishisayo.
Ukubuyekezwa mayelana ne-powder yamaminerali "UClarence" inhle, kanti abanye baze banomdlandla. Abathengi baphawula ukuthi umkhiqizo ungasetshenziswa wedwa noma ngaphezulu kwe-concealer, umkhiqizo we-tonal noma umswakama. Kunoma yikuphi, umkhiqizo uzobhekana nomsebenzi owenzile - ukuqeda ukungapheleli nokulungisa umphumela.
Abathengi banakekelwa ngokukhethekile emaphaketheni. Noma yiyiphi intombazane iyojabula ukugcwalisa isikhwama sayo sezimonyo nge powder, efihliwe ebhokisini elihle kakhulu emthunzini wegolide esikhwameni esiluhlaza se-velvet. Ukuze kube lula ukusetshenziswa, umenzi ubeke isibuko esihlalweni, futhi njengesengezo kukhona isiponji.
Kubathandi bokushisa kwelanga: Bronzing Duo
Umkhiqizo kusukela eqoqweni ehlobo lohlobo lwe- Enchanted Summer. Amaminerali amabili-ithoni ye-ithoni enezihluthulelo zelanga. SPF 15. Umkhakha omnyama ukhanyisa ngegolide ephahlazekayo, uma ujikeleza iphakheji ezandleni zakho, ukukhanya kuyoba okuhlukile. Umthunzi okhanyayo - matte.
Njengoba ubona, amakomidi womabili afaneleka ukusetshenziswa kokuzimela, ngoba ububanzi buhle kakhulu kuhlelo lokusebenza lokuxubha. Okuthakazelisa kakhulu, umthunzi omnyama wemibala yenyama awunayo i-bronzing effect.
Umbusi umelelwa ama-shades amathathu:
Ukubuyekeza mayelana ne-powder "Clarence" nomphumela wokushisa ilanga kulungile. Abathengi baneliseke "ngomsebenzi" wokukhanya okukhanyayo. Abesifazane abaningi abavumile, abazange bahlangane ne-powder enomthelela onjalo. Futhi, abathengi baphawula ukuthi ehlobo elishisayo, lokhu kuyisidingo esiyisisekelo.
Ukulindela kusuka ekuthumeni okumnyama kwakungafaneleki. Njengoba kwenzeka, kukhanya ekamelweni le-powder, kodwa akukho ubuso. Uma ubheka kakhulu, ungabona ukukhanya, kodwa, ngeshwa, lokhu akuwona umphumela wonke umuntu owawufuna.
Faka i-Compact Haute Tenue
Ukuhlaziywa ngentshiseko ka-Clarins powder nge-texture enobuciko obuqanjwe ngamaforamu egcwele. Akumangalisi, ngoba abakhiqizi bagcina isithembiso sabo, umkhiqizo uhlinzeka ngamahora angu-15 okungafaneleki!
Ekudalweni indlela entsha yokuKhuthazeka okuPhezulu yasetshenziswa. "Uhlelo oluphakeme lokuzinza" luhlanganisa ukwakheka kwe-microfilm engabonakali ehlanganisa ama-polymers futhi ehlangene no-100% wobumba obunobungozi - i-hectorine.
Ungasebenzisa ukhilimu we-ukhilimu ngezindlela ezimbili: owomile ukuze uthole umphumela wemvelo, futhi umanzi - ukwenza ukwakheka kusihlwa.
Umbusi umelwe yi-shades elandelayo:
103 IVORY 103 Ivory Ivory;
105 I-NUDE 105 Yokwemvelo;
107 ISIHLOKO 107 Isiqu;
IKHASI 109 UKolweni;
HONEY 110 Uhlobo.
Naphezu kweqiniso lokuthi umkhiqizo ekukhoneni komkhiqizo akude nomusha, awekho imibono eminingi mayelana nama-Klarans oku-powder okuxekethile. Ngakho-ke, ukubuyekezwa kuzosekelwe kumazwana atholakalayo.
Umkhiqizi uthi umkhiqizo ungenza isikhumba semvelo, kuyilapho sigcina ukubukeka kwayo kwemvelo. Ingabe lokhu kunjalo ngempela?
Uma wenqaba zonke izitatimende eziphezulu, i-powder ayikwazi ukubizwa ngokuthi i-100% yamaminerali, ngoba iqukethe i-talc.
Amakhasimende akhulume ukunganeliseki mayelana nokuphazamiseka kokupakisha, kodwa waphawula ukuthi ukungabi nalutho kuhlanganisa ngokuphelele isisindo se-powder - okungenani amagremu angu-30! Lokhu kuphetha wonke umonakalo.
Umkhiqizo uhanjiswa kulezi zithunzi ezilandelayo:
Ukukhanya okukhanyayo oku-01;
02 medium medium;
03 efudumele obala.
I-powder iyabonakala futhi yenzelwe ukulungisa isisekelo se-tonal. Qedela, ngokusho kwamakhasimende, kuvela kahle kakhulu futhi kukhanya okulula.
Ubuhle ngaphandle kwemicabango
I-Brand Clarins kanye namanye ama-brand inikeze imikhiqizo yayo eyinhloko hhayi kuphela i-vestment entsha, kodwa iphinde ithuthukise indlela yokukhiqiza. Ngalesi sikhathi i powder enopulisiwe "Clarens" - Skin Illusion yashintshwa.
Njengoba sikhumbula, i-cube enkulu-cube, lapho umkhiqizo wawufihlwe ngaphambili, kwakunzima ukuyibiza ngokulula. Ikakhulukazi uma amantombazane kufanele aphuze impumulo izikhathi ezimbalwa ngosuku. Ngenxa yenkambiso yokuziphatha, inkampani yanquma ukushintsha imaphakethe futhi yenze ibe yinkimbinkimbi.
Ngaphambili, ibhulashi kwakudingeka ihlehliswe esihlalweni. Manje kuthatha isikhala esincane futhi sifana nendawo ephakathi. Okuthakazelisayo ikakhulu ukuthi manje isibhamu sesifakwe amandla. Ngakho-ke, inkinga ngokulahlekelwa kwayo kusuka elicaleni kanye nokulahlekelwa ekujuleni kwesikhwama sesifazane ixazululwa!
I-powder kanye "uClarence Skin Illusion" isiye yaba nenhle futhi inhle kakhulu. Uma ngaphambili icala lihlukaniswa nokutholakala kwamakhonksi ahlabayo, manje sekuthole amafomu azungezile. I-Powder ayiyona nje into elula yokubamba ngesandla, kepha, ukwahlulela ngezibuyekezo, kuthatha isikhala esincane.
Manje siya phambili ekutadisheni okuningiliziwe kwesibhamu. Kungenxa ye-hue yegolide enezindonga ezihambayo, okuyivumela ukuba "iqhubekele" njengokungathi ingene ngaphakathi, futhi ingabi yinto enzima. Igama elihlukile kufanele likhulunywe mayelana nenqwaba ethambile, efanelekayo ukusebenza ne-powder.
Ukuze uvikele umkhiqizo ekuphambeni, iphakheji yenziwe nge-stopper-transparent ebonakalayo. Noma kunjalo, ubani ongakhululekile, angayisusa.
Isembozo segolide sobukhulu obuhle sihlelwe ngalendlela elandelayo: i-membrane ekhethekile yepulasitiki ikhiwe ekulawuleni ukulethwa kwe-powder. Umkhiqizo ngokwawo uvela emigodini encane ekhona emaphethelweni. Ngakho-ke, inqubo yokwenza izimonyo ibe yinto elula kakhulu, ngoba ingozi yokuqothula nokungcola iyinto encane.
Incazelo ye-Skin Illusion powder
Umkhiqizo onomngcwabo ubhekwa njengowokujwayelekile emgqeni wegama elithi "Clarence", futhi abesifazane bathande ukusebenzisa kwabo yonke indawo nokugqoka okungavumelani.
Ukugaya i-powder kuhle kakhulu futhi kufana nokufulawa. Ngokuqondene nokuthungwa, kubonakala kuncibilika, kuthinta isikhumba, okuholela ekugqokeni kwe-velvet engabonakali. Kodwa-ke, ngezinzwa ezithinta inhliziyo, futhi ngokubukeka kufana nekhilimu yezwi. Ngokusho kwamakhasimende, i-powder "I-Clarence Skin Illusion" - iyasebenza kakhulu futhi iyaphonsa ukusebenzisa ikhophi.
Mhlawumbe imfihlo ukuthi i-mineralized, hhayi i-100% yamaminerali. Lapho kukhona i-talc, nje lokhu isithako amantombazane amaningi azama ukugwema. Kodwa-ke, kuhle kakhulu ukwenza lokhu "iphutha" lekhasimende lilungele ukuthethelela.
Ifomula yomkhiqizo isekelwe ezithandweni zemvelo:
Ubuningi be-opal pink basetshenziselwa ukunikeza ukukhanya okumangalisayo nokuphunga isikhumba;
Ngomphumela we-tonic uhambelana nokukhishwa kwe-pink alga, enesakhiwo esishukumisayo nesiphuthumayo.
I-powder yamaminerali "uClarens" inephunga elimnandi le-herbal, kodwa ngemuva kokuxhumana nesikhumba, ngemuva kwesikhathi iqhuma.
Asikhulume ngento esemqoka - isembatho esakhiwe esikhumbeni. Njengoba kushiwo ngaphambili, i-powder ingasetshenziswa njengesisekelo, njengoba ifihla ngokuphelele ukungapheleli kwesikhumba. I-degree yokufihla ingahlukahluka ngokubeka i-powder. Kulesi simo, ukuzwa kwe-mask ngeke kube. Akawa emaceleni futhi akagcizeleli imibimbi.
Ukubuyekezwa kwe-powder "UClarence Skin Illyuzhn" uthola okuhle kakhulu: amakhasimende anelisekile lapho ebhekene nenothi elifanele lezocansi ukuthi umkhiqizo ngenxa yokwakheka kwawo kwemvelo, hhayi ukugqoka ama-pores, ulungele isikhumba se-oily kanye nenhlanganisela. Ngaphezu kwalokho, i-agent yokuhlobisa ikhanda ngokucacile ukukhanyela ebusweni bese ihlanganisa ukungapheleli. Futhi, abesifazane baneliswe yi-powder ngokulinganisa "kwekhwalithi yamanani." Umkhiqizo awuyona ingxenye yesigceme sezimali, kodwa, "umsebenzi" ophelele okukhethwa amakhasimende anamazinga ahlukene okuthola imali.
Ekugcineni: imibono kaColenay-Clarence embonini yobuhle
Phakathi kwemisebenzi yakhe kukhona okubaluleke kakhulu ekuhlolweni kwesayensi nokutholakala. Ukuthakazelisa kuka-Kurten nge-aromatherapy kwaholela eqinisweni lokuthi wafunda ngemithi yemithi kanye nezitshalo zokwelapha zezitshalo nezitshalo.
UClarence yi-cosmetologist wokuqala owaqala ukusebenzisa amafutha emvelo ngezimonyo. Wabuye waphawula futhi wafakazela umphumela wokuvuselela kanye nezindawo zokuzivikela ze-alpine herbs nezitshalo.
Umqondo omusha kaClarence kwakungukudala izimonyo ezikhethekile zokulahlekelwa isisindo nezimali zokulwa nesilwane.
Kwakuyi-Research of the Clarins laboratory eyenza ukukhiqizwa kwemikhiqizo yokuqala yezimonyo zomhlaba ngokuvikela emisebeni yombane neye-ultraviolet.
Imikhiqizo "Belvedere": chapstick. Uhlolojikelele, zinhlobo Ukwakheka kanye nokubuyekeza
Kuyamangalisa zikanokusho efudumele ebusika ovaloli Deux Par Deux